Bible Mu Nsɛm Dawid ne Goliat - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
FILISTIFO san bae bio sɛ wɔne Israel rebɛko. Afei de na Dawid nuanom mpanyimfo no baasa wɔ Saul dɔm no mu. Enti da koro Yese ka kyerɛɛ Dawid sɛ: ‘Fa nkyewe ne abodoo yi kɔma wo nuanom, na hwɛ sɛnea wɔn ho te.’
Bere a Dawid koduu hɔ no ɔkɔɔ akono hɔ kɔhwehwɛɛ ne nuanom no. Ná Filistini Goliat ɔbran no redi Israelfo ho fɛw. Na wayɛ eyi adaduanan, anɔpa ne anwummere. Ɔteɛm sɛ: ‘Munyi mo mu nipa biako na ɔne me mmɛko. Sɛ odi nkonim kum me a, yɛbɛyɛ mo nkoa. Na sɛ midi nkonim kum no a, mobɛyɛ yɛn nkoa. Mo de mompaw obi na ɔne me mmɛko nhwɛ.’
Dawid bisaa ɔsraani bi sɛ: ‘Dɛn na onipa a obekum Filistini yi na obegye Israel afi animguase yi mu no benya?’
Ɔsraani no kae sɛ: ‘Saul bɛma no ahonyade pii. Na ɔde ne babea bɛma no aware.’
Nanso na Israelfo nyinaa suro efisɛ na Goliat sõ yiye. Ná ne tenten boro anammɔn 9 (bɛyɛ sɛ mita 3), na na ɔsraani foforo kura ne kyɛm.
Asraafo bi kɔka kyerɛɛ Ɔhene Saul sɛ Dawid pɛ sɛ ɔne Goliat ko. Nanso Saul ka kyerɛɛ Dawid sɛ: ‘Wuntumi ne Filistini yi nko. Woyɛ abofra koraa, na ɔno ayɛ ɔsraani fi ne mmofraase.’ Dawid buae sɛ: ‘Mikum osisi ne gyata bere a wɔkyeree me papa nguan no bi no. Na Filistini yi bɛyɛ sɛ wɔn mu biako. Yehowa bɛboa me.’ Enti Saul kae sɛ: ‘Kɔ, na Yehowa nni w’akyi.’
Dawid kɔɔ asuten bi ho kɔtasee mmoba anum, na ɔde guu ne kotoku mu. Afei ɔfaa n’ataabo na osiim sɛ ɔrekohyia ɔbran no. Bere a Goliat huu no no na ontumi nnye nni. Osusuwii sɛ ɛbɛyɛ mmerɛw koraa sɛ obekum Dawid.
Goliat kae sɛ: ‘Wo de bra, na mede wo nam bɛma nnomaa ne mmoa ma wɔadi.’ Nanso Dawid kae sɛ: ‘Nkrante, peaw ne pɛmɛ na wode reba me nkyɛn, nanso me de, mede Yehowa din na mereba wo nkyɛn. Ɛnnɛ, Yehowa de wo bɛhyɛ me nsa na mabɔ wo ato fam.’
Ɛnna Dawid de mmirika kohyiaa Goliat. Oyii ɔbo fii ne kotoku mu de hyɛɛ n’ataabo no mu na ɔde n’ahoɔden nyinaa towee. Ɔbo no kɔbɔɔ Goliat ti, na ɔhwee ase wui! Bere a Filistifo no hui sɛ wɔn katakyie no ahwe ase no, wɔn nyinaa guanee. Israelfo no de mmirika dii wɔn akyi na wodii nkonim.
Mpoa bɛn na Goliat twaa Israelfo asraafo no?
Goliat tenten ne ne kɛse te dɛn, na akyɛde bɛn na Ɔhene Saul kae sɛ ɔde bɛma obi a obetumi akum Goliat?
Bere a Saul ka kyerɛɛ Dawid sɛ ɔyɛ abofra nti ontumi ne Goliat nko no, dɛn na Dawid kae?
Bere a Dawid rema Goliat mmuae no, dɛn na Dawid kae a ɛkyerɛ sɛ ɔde ne werɛ ahyɛ Yehowa mu?
Sɛnea wutumi hu wɔ mfonini no mu no, dɛn na Dawid de kum Goliat, na ɛno akyi no, Filistifo no yɛɛ dɛn?
Kenkan 1 Samuel 17:1-54.
Dɛn nti na Dawid ammɔ hu, na yɛbɛyɛ dɛn asuasua n’akokoduru no? (1 Sam. 17:37, 45; Efe. 6:10, 11)
Sɛ Kristofo redi agoru anaa wɔregye wɔn ani a, dɛn nti na ɛsɛ sɛ wɔkwati akansi honhom a Goliat daa no adi no? (1 Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1 Tim. 4:8)
Dɛn na ɛwɔ nsɛm a Dawid kae no mu a ɛkyerɛ sɛ na ɔwɔ gyidi sɛ Onyankopɔn gyina n’akyi? (1 Sam. 17:45-47; 2 Be. 20:15)
Yɛyɛ dɛn hu sɛ ɔko no yɛ nokware Nyankopɔn Yehowa ne abosom ntam ko ankasa na ɛnyɛ asraafo dɔm abien bi ntam ko? (1 Sam. 17:43, 46, 47)
Ɔkwan bɛn so na wɔn a wɔasra wɔn no mufo a wɔaka no suasua Dawid de wɔn ho to Yehowa so? (1 Sam. 17:37; Yer. 1:17-19; Adi. 12:17)
Kenkan Bible mu asɛm a ɛyɛ anigye yi na hu nea ɛmaa Dawid nyaa akokoduru a ɛte saa.